Rugby amin’ny tora-pasika :: Handray ny “Esprit beach” i Toamasina • AoRaha
Rugby amin’ny tora-pasika Handray ny “Esprit beach” i Toamasina
Hifanome fotoana any amin’ny Faritra Atsinanana ireo mpilalao baolina lavalava amin’ny tora-pasika, amin’ny volana jona ho avy izao. Hotanterahina any Toamasina ny andiany faharoan’ny « Esprit Beach » hokarakarain’ny Malagasy Rugby, amin’ny 15 sy 16 jona 2019. Natokana ho an’ireo mpianatra 9-17 taona ny andro voalohany. Ny andro faharoa kosa no hifaninanan’ireo lehibe milalao fotsiny sy ireo efa manana traikefa. Ekipa efatra ambin’ny folo no anaty lisitra hatreto ary ao anatin’izany ny klioba nasaina avy atsy La Réunion.
“Somary mbola vaovao ny baolina lavalava lalaovina eny amin’ny tora-pasika eto Madagasikara. Nanao fampahafantarana ny fitsipika ny tenako mialoha ny hetsika ny alahady lasa teo”, hoy ny fanazavan-dRantenainarisoa Dina Andriantanjona, mpanolo-tsaina teknikam-paritry ny fikambanana Atsinanana Rugby.
Tafiditra ao anatin’ny fampahafatarana ny taranja any amin’ny Faritra Atsinanana sy fitazaina ireo ankizy sy tanora izao hetsika izao. Mba hikolokoany ny tontolo sy ny fahadiovana eny amin’ny tora-pasika no tanjon’ny mpikarakara. Mbola haparitaka manerana an’i Madagasikara ihany koa ny fifaninanana amin’ny taona ho avy, araky ny nambaran-dRantenainarisoa Dina Andriantanjona hatrany.
Basket-ball “Smatch-in” :: Tsara vokatra ireo tompondaka farany
Basket-Ball – N1a